Habeenkii kale waxaan la hadlayey suuqle kale waxaanan ka wada hadlaynay baraha bulshada, dhacdooyinka, iyo natiijooyinka. Wuxuu ii sheegayay sida uusan wali ugu arkin natiijooyinka baraha bulshada si uu uga dhigo mid qiimo leh. Si aan runta u sheego, ma dhihi karo gebi ahaanba waan diidanahay. In kasta oo astaanteyda xirfadeed iyo gaarista ganacsigeyga ay sii kordhayaan, dadka waxaa laga yaabaa inay ogaadaan in shaqsiyadeyda raacsan ee warbaahinta bulshada ay fadhiyeen in muddo ah.
Miyaan joojin doonaa firfircoonida suuqgeynta iyo ka faa'iideysiga warbaahinta bulshada? Gabi ahaanba maahan - wali waa kanaal ay dhagaystayaashaydu ka jiraan, beel qiimo ku kordhinaysa shaqadayda, iyo halka ay dadku ku baadhaan go'aamada iibsiga. Si fudud maahan sida ugu dhakhsaha badan or faa'iido sida kanaalada kale aniga ila yihiin. Waxaan ogaaday inaan kordhiyay saameynta warbaahinta bulshada markii aan kudarsaday suuq-geynta suuq-geynta iyo dallacsiinta in kabadan u isticmaalkeeda kanaal silo'd ah, marka taasi waa sida aan u maamulno una fulino istiraatiijiyaddeenna warbaahinta bulshada.